Jose Mourinho oo daaha ka rogay labada kooxood ee ugu cad-cad ku guuleysiga Koobka Horyaallada Yurub ee Champions League – Gool FM
(Yurub) 24 Maarso 2019. Macallinka weli shaqo la’aanta ku jira ee Jose Mourinho ayaa daboolka ka rogay labada kooxood ee ugu cad-cad ku guuleysiga tartanka Champions League oo haatan maraya siddeed dhammaadka.
Isagoo wareysi siinayey France Presse ayuu macallin Jose Mourinho sheegay in Champions League uu yahay mid adag xilli ciyaareedkan, maadaama isaga laftiisu ka soo qeyb galay heerkiisii Guruubyada ka hor inta aan laga cayrin maamulka kooxda Manchester United.
Macallinkii hore ee Man United Jose Mourinho ayaa iska diiday in koox Ingiriis ah ay ugu cad-cadahay hanashada koobka horyaallada Yurub, waxaana taas bedelkeeda uu sheegay in kooxda reer Talyaani ee Juventus iyo midda reer Spain ee Barcelona ay yihiin kuwa ugu cad-cad ku guuleysiga Champions League.
Waxa uu Mourinho hadalkiisa raaciyey in kooxaha Juventus iyo Barcelona ay haystaan xiddigo gaar ah, hibo iyo khibradba leh.
“Waxaynu dhammaant ka hadalnaa Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi laakiin anigu waxaan door-bidayaa inaan ka hadlo Juventus iyo Barcelona.” ayuu yiri macallinka isku magacaabay Special One.
“Waan ogahay in qofkasta diiradda saaro arrimaha shaqsiga ah, laakiin anigu markasta waxaan ahaan doonaa tababare kubadda cagta ah, waxaanan markasta noqon doonaa koox isboorti.”
“Juventus iyo Barcelona waa musharraxiinta waa weyn, laakiin sidoo kale kooxaha Ingiriisku waa ay joogaan halkaas, sidoo kale Ajax iyo Porto.”
“Juve iyo Barca waxay leeyihiin khibrad iyo in mid kasta uu haysto xiddigo gaar ah, caadiyan marka aad haysato ciyaartoy gaar ah waxaad tahay koox ka wanaagsan kuwa kale.” ayuu hadalkiisa ku soo xiray Jose Mourinho.